Lesi yisikrini se-Apple Watch ngaphansi kwesibonakhulu | Ngivela kwa-mac
Lesi yisikrini se-Apple Watch ngaphansi kwesibonakhulu
UPedro Rodas | | Apple, I-Apple Watch, Izaziso
Ngesikhathi lapho ukhona ebuza impumelelo ye-Apple Watch, sithola idatha emisha nezithombe ezisenza sibone ukuthi bezilungile kanjani eCupertino lapho bekhiqiza lo mqondo omusha wamawashi ahlakaniphile. Akusikho okokuqala ukuthi kukhulunywe ngakho ngesikrini se-Apple Watch. Sesikushilo lokho kuhlanganisiwe iphaneli eliphinda lenze kabusha abamnyama ukwenza onqenqemeni lwesikrini cishe lungabonakali ngephaneli uqobo lwayo.
Manje sebebeke ngaphansi kwamalensi emicroscope isikrini i-Apple Watch mount futhi bayiqhathanisa nemiphumela etholwe naleyo ye-iPhone 6. Uzokwazi ukuphinda ubone lokho isikrini laba abancane abanaso sihle kakhulu.
Sethula ezinye zezithombe uBryan Jones akwazile ukuzithwebula ngesibonakhulu sakhe seRetina esibukelwe yizo zontathu izinhlobo ze-Apple Watch. Masikhumbule ukuthi yize iphaneli abayikhuphukayo lifana, ingilazi esembozweni yehlukile, ngoba eye-Apple Watch ne-Apple Watch Edition eyenziwe ngengilazi yesafire.
Isikrini se-IPhone 6
Njengoba ukwazi ukubona ezithombeni esikukhombisa zona, ikwazile ukukhulisa isikrini ize ihlukanise amaphikseli ngamanye kanye nama-sub-pixels. Endabeni ye-Apple Watch, iphaneli elisetshenzisiwe yi-AMOLED, ngokungafani noma yimuphi omunye umkhiqizo we-Apple kuze kube manje ususebenzisa amaphaneli e-LCD. Ku-iPhone amaphikseli asondelene kakhulu futhi okubomvu, okuluhlaza nokuhlaza okwesibhakabhaka kuqondaniswe mpo.
Esikrinini se-Apple Watch, ama-sub-pixels aluhlaza okwesibhakabhaka ahlukanisa ngokuphelele lawo abomvu naluhlaza, nawo futhi made. Amaphikseli aluhlaza okwesibhakabhaka made ngoba ngoba kubuchwepheshe be-OLED, lawa anempilo enempilo emfushane, yokusetshenziswa kwamahora angaba ngu-20.000 XNUMX, okungadala ukuthi eminyakeni emithathu yokusetshenziswa bayeke ukukhanyisa. Ukunciphisa lo mphumela ziya zikhula.
Ngakolunye uhlangothi singabona amanye amachashazi e-orange, okungelutho ngaphandle kohlelo olubucayi lwe-Force Touch esikrinini se-Apple Watch. I-Apple ichaza la machashazi kuwebhusayithi yayo njenge:
Ngaphezu kokubona ukuthinta, i-Apple Watch izwa ingcindezi, engeza ubukhulu obusha kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi. I-Force Touch isebenzisa ama-electrode amancane azungeze isibonisi seRetina esiguquguqukayo ukwehlukanisa phakathi kokuthinta okulula nengcindezi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Lesi yisikrini se-Apple Watch ngaphansi kwesibonakhulu
Sivele sinosuku lokukhishwa kwe-Steve Jobs biopic eSpain
IBanco Santander ihlala ku-Apple Pay kodwa e-UK